Uncategorized – webiyoow
February 25, 2017 ahmedzidani22
Dagaalka sedaxaad ee aduunka waxaa uu ka socodaa social mediada sida facebook ama twitterka. Habeen iyo maalin waxaad arkeysaa malaayiin fariimod kuwaasoo isku jira dhaleecayn, aflagaado qaran iyo qabiilba leh.
Soomaalida ayaa kamid noqotay dadka ugu hadal heynta badan markii dhawaan la soo doortay madaxweyne cusub kaasoo ku imid rabitaanka shacabka. Mudo yar kadib markuu madaxweynaha kursigiisa ku fadhiistay ayaa qolo yar weerar kaga soo qaaday dhanka Social mediada taasoo ay noqotay arin khatar galisay xukunka cusub ee dalka waxaana lasoo faagay ceebihii madaxda hore ay dalka ugu galeen walow ay sidaa tahay ayaa madaxweynaha difaac fiican ka helay qabiilkiisa kuwaasoo la garab istaagay cay iyo aflagaado ka dhan ah qabiilda kale. Mid aan u maleeyay inuu madaxweynaha qaraabo yihiin ayaa aflagaadeyay qabiilkeyga aniga waxaan ku soo biiray askarta afka ee social mediada waxaana lehyahay sidaan: Aniga waxaan dhashtay marixaan cararkii waxaana ku caqliyeystay marixaan oo miskiin ah aad moodid inuu miir laheyn markaan haddii aad aflagaadada joojin weydo adeeer warka warkii hore ma ahaan ee waa cusub ayaa noo bilaawday!
March 10, 2016 ahmedzidani22
Riyadeyda waa adiga rumeynteeda waa adiga!
Anigu waxaan ahay mid iska riyooda. Habeen iyo maalin adigaan kugu riyoodaa. Qaali adigana waxaan ku siinayaa riyooyinkeeyga si aad u ogaatid riyooyinkeyga macaankooda. Adigu waxaad tahay ruux igu qaali ah mar walibana adigaan kugu riyoodaa. Qaali aan wax yar kaga sheege riyadeyda ha moodin in aan xumaan ku riyoodo ee waxaan ku riyoodaa adoo raali ah runtana iigu warmaayo.